musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Martinique Kupwanya Nhau » Martinique inoenderera mberi nekuvhara, inotaurira vashanyi kuti vaende
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • France Kuputsa Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Martinique Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dunhu reMartinique rakurudzira kuti vashanyi vasina njodzi uye vasina kubaiwa majekiseni varege kuramba vachigara.
Matanho matsva akagamuchirwa neProvince yeMartinique neMuvhuro, Nyamavhuvhu 9.
Martinique yakazivisa yakasimbiswa kukiya kutangira Chipiri, Nyamavhuvhu 10, na7: 00 manheru.
Martinique Tourism Authority yataura kuti mamiriro ehutsanana haachasanganisirwe kuti vagare mumamiriro akanaka.
Matanho matsva akagamuchirwa neProvince yeMartinique nemusi weMuvhuro, Nyamavhuvhu 9, ichisimbisa kukiya kwakasimbiswa muMartinique kwenguva yevhiki nhatu, kutanga Chipiri, Nyamavhuvhu 3, na10: 7 manheru.
Mukuona kwemamiriro ezvinhu, iyo Dunhu reMartinique yakurudzira kuti vashanyi vasina njodzi uye vasina kubaiwa majekiseni varege kuramba vachigara.
The Martinique Tourism Chiremera yakatsanangura kuti hutsanana mamiriro haachagone kugarisana munzvimbo dzakanaka.
Nekudaro, nzvimbo dzekugara hadzizovharwe zvine hungwaru panguva ino yekukiya. Vashanyi saka vanozove nenguva kana vachida kufunga zvekuita, vachitevedzera matsva matsanana matanho ari kushanda. Martinique Tourism Authority inounganidzwa kuti ipindure zvikumbiro zvevashanyi neruzivo uye nekupa rubatsiro rwekubva kwavo kuchitsuwa.
Mahotera uye mapuratifomu emahotera emahotera ari kupa anochinjika, pasina-mutengo kudzoserwa uye kudzima mazwi akaenderana nedambudziko iri. Uye zvakare, iwo mana makuru ndege dzinoshanda Martinique panguva ino (Air France, Air Caraïbes, Corsair neAir Belgium) vadzokorora zvirongwa zvavo zvekubhururuka kubatsira vafambi veFrance neveBelgium kuronga kuenda kwavo mumazuva anotevera. Air Caraïbes ichapa kusvika kumatatu kutenderera nzendo pazuva pakati peFort-de-France neParis.
Padivi reAir France, nendege nhatu pazuva dzinozoitwa muna Nyamavhuvhu 11 ne12 kubva kuFort-de-France, kozo ndege mbiri pazuva kubva Nyamavhuvhu 13 kusvika 15. Kubva Chitatu, ndege inoshandiswa nekambani ichave nepamusoro chinzvimbo (kusvika 160 vatakurwi). Pamusoro pezvo, vese vafambi avo kudzoka kwavo kwakarongwa naNyamavhuvhu 22 uye vanoshuvira kudzokera kuFrance pamberi paAugust 15, vachakwanisa kudzokorora kuenda kwavo pasina imwezve mari.
Nezve US kufamba kuenda nekudzoka Martinique, American Airlines inofanirwa kutangazve nendege dzayo dzisingamisi kubva kuMiami kuenda kuFort-de-France kutanga kwaMbudzi wegore rino.
Dea Malli anoti:
Nyamavhuvhu 14, 2021 pa06: 59
Martinique yaita sarudzo yakanakisa pano, sezvo denda iri rinovimbisa kureba kutoti majekiseni akakurumidza kuitirwa.
Covid-19 icharamba ichiburitsa misiyano mitsva (ikozvino Delta neLambda) kunze kwekunge isu tikakwanisa kudzikisa zvakanyanya huwandu hwehutachiona. Vazhinji vanhu havana ruzivo rwekuti kwenguva yakareba sei hutachiona hutachiona kubva kububonic denda uye zvichienda mberi zvakatsungirira. Vakabvisa huwandu hwakawanda hwevagari vemo munguva yavo, asi vakaramba vachiuraya vanhu chero kwavakawana ipapo kwemakore mazana maviri uye dzimwe nguva zvimwe.
Chengeta Martinique yakachengeteka. Icho chitsuwa chinoshamisa!